Akwụkwọ Ozi Nke Abụọ E Degaara Ndị Kọrịnt 4:1-18
Ìhè ozi ọma na-enye (1-6)
E kpuchiri uche ndị na-amaghị Chineke (4)
Anyị dị ka ite ájá akụ̀ dị n’ime ya (7-18)
4 N’ihi ya, ebe e meere anyị ebere hapụ anyị ka anyị na-eje ozi a, ike ije ya anaghị agwụ anyị. 2 Anyị ahapụla omume ndị na-eme ihere a na-eme na nzuzo. Anyị anaghị aghọ aghụghọ, anyị anaghịkwa agwagbu okwu Chineke.+ Kama, anyị na-akụzi ihe bụ́ eziokwu, si otú a na-egosi na anyị na-eme ihe dị Chineke mma, nke dịkwa akọnuche mmadụ niile mma.+ 3 Ọ bụrụ n’eziokwu na e kpuchiri ozi ọma anyị na-ezisa ihe, ọ bụ n’anya ndị a ga-ala n’iyi ka e kpuchiri ya ihe. 4 Ndị a bụ ndị na-amaghị Chineke, ndị chi nke oge a*+ kpuchiri uche ha,*+ ka ha ghara ịhụ ìhè+ ozi ọma dị ebube banyere Kraịst, onye bụ́ onyinyo Chineke.+ 5 Anyị anaghị ekwusa gbasara onwe anyị, kama anyị na-ekwusa na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, nakwa na anyịnwa bụ ndị ohu unu n’ihi Jizọs. 6 N’ihi na ọ bụ Chineke sịrị: “Ka ìhè si n’ọchịchịrị nwuo.”+ O sila n’ihu Kraịst mee ka ìhè nwuo n’obi anyị.+ Ìhè ahụ bụ ịma ihe ndị dị ebube gbasara Chineke. 7 N’agbanyeghị na anyị dị ka ite ájá,+ anyị nwere akụ̀.+ Akụ̀ a anyị nwere na-egosi na anyị nwere ike karịrị ike mmadụ. Ike a abụghị nke anyị, kama, ọ bụ Chineke nyere ya anyị.+ 8 Ọtụtụ nsogbu na-abịara anyị n’ụzọ niile, ma ọ pụtaghị na nke anyị na-eme agwụla. Ọtụtụ ihe na-agbagwoju anyị anya, ma anyị na-emecha mara ihe anyị ga-eme.+ 9 A na-akpagbu anyị, ma Chineke anaghị ahapụ anyị.+ A na-akwada anyị n’ala, ma anyị anaghị anwụ.+ 10 Ebe ọ bụla anyị gara, a na-enwe ihe nwere ike igbu anyị otú ahụ o mere Jizọs. Ihe a na-egosi na anyị na-ata ahụhụ otú Jizọs tara.+ 11 A na-enwe ihe nwere ike igbu anyị mgbe niile+ n’ihi na anyị na-eso ụzọ Jizọs. Ọ na-egosikwa na anyị na-ata ahụhụ otú Jizọs tara. 12 Anyị na-anọ n’ọnụ ọnwụ mgbe niile, ma, ọ bụ ka unu wee dị ndụ. 13 E dere, sị: “Ekwuru m okwu maka na m nwere okwukwe.”+ Anyịnwa nwekwara okwukwe otú ahụ. Ọ bụ ya mere anyị ji na-ekwu okwu. 14 N’ihi na anyị ma na onye ahụ kpọlitere Jizọs ga-akpọlitekwa anyị ka anyị na Jizọs nọrọ, ọ ga-akpọtakwa anyị na unu n’ebe Jizọs nọ.+ 15 Ihe a niile bụ maka ọdịmma unu, ka Chineke wee mekwuoro ọtụtụ ndị amara. Ọ na-emekwuru ọtụtụ ndị amara ma ha na-eto ya ma na-ekele ya.+ 16 N’ihi ya, anyị anaghị ada mbà. Ọ bụrụgodị na ike na-agwụ elu ahụ́ anyị, a na-eme ka ime ahụ́ anyị na-esikwu ike kwa ụbọchị. 17 Nsogbu ndị na-abịara anyị anaghị adịte aka, idi ha na-adịkwa mfe, ma, ngọzi anyị na-esi na ha enweta na-ehikwu nne, na-adịrukwa mgbe ebighị ebi.+ 18 N’ihi ya, ihe anyị na-echekarị abụghị ihe a na-ahụ anya, kama ọ bụ ihe a na-anaghị ahụ anya.+ N’ihi na ihe a na-ahụ anya anaghị adịte aka, ma ihe a na-anaghị ahụ anya na-adịru mgbe ebighị ebi.
^ Na Grik, “mere ka uche ha kpuo ìsì.”